ကျောင်းသားများ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးမှု နှင့်ပါတ်သက်သော စစ်ဆေးပုံများ အကြောင်း ဟောပြောပွဲနှင့် RWCT ဆရာဆရာမများ တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်	Posted on January 25, 2010	by bmta05 ဇန်နဝါရီ ၂၅။ မဲဆောက်
ဆရာမMary Wootten မှရှင်းလင်း ပြောကြားနေစဉ် ဆရာ ဒေါက်တာသိန်းလွင်မှ ရှင်းလင်း ပြောပြနေစဉ် ဆရာ Steve Wootten မှ ရှင်းလင်း ပြောကြားနေစဉ် BMTA ဥက္ကဌနှင့် CDC ကျောင်းအုပ်ကြီး ဆရာမန်းရွှေနှင်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြားနေစဉ် ထူးခြားချက်တခုမှာ ပြည်တွင်းတွင် RWCT နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု သင်ကြားပေးနေသော ဆရာဆရာမ အချို့လဲ တက်ရောက်ကြပြီး သူတို့၏ အတွေ့ အကြုံများကို ရှင်းလင်းပြောပြ ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted in သတင်း. Bookmark the permalink.	← ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးကာလတွင် ဆရာ/ဆရာမများကြုံတွေ့ရသည် အခက်အခဲများ